Mabhuku aNora Roberts, nhaka isingaenzaniswi yevanhu | Zvazvino Zvinyorwa
Nora Roberts mabhuku
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Mabhuku
Mabhuku aNora Roberts anosanganisira anopfuura makumi maviri nemashanu zvinyorwa zvakanyorwa pamusoro pemakumi mana emakore enhoroondo yekunyora. Uyu munyori wekuAmerica anowedzera anoshandisa kuderedzwa kwezita rake rekuzvarwa, Eleanor Marie Robertson, kusaina yake enhau dzerudo. Pamusoro pezvo, inoshandisa mabikirwo aJill Kurume, Sarah Hasdesty (mumatunhu eBritish) uye JD Robb.
Munyori weAmerica anowanzoshandisa mamwe mazita emadunhurirwa kuratidza kwake kwekufungidzira uye kwesainzi zvinyorwa zvekunyepedzera. Saizvozvo, pasi pezita rezita rekuti Nora Roberts mazhinji emazita ake akaonekwawo. best seller thriller. Iine anoyevedza manhamba ekunyora, Hazvishamise kuti akaendeswa kuMufambo weVakakurumbira semunyori wekutanga-akaberekwa wekuAmerica.
1.1 Mabhuku ekunyora
2 Nzvimbo yekuvaka
2.1 Nhepfenyuro Chitsuwa cheVatatu Sista - Vatatu Sista Chitsuwa
2.2 Circle Trilogy - Circle Trilogy (fantasy zvinyorwa nezvevampires)
2.3 Chiratidzo cheManomwe Trilogy - Chiratidzo cheChinomwe
2.4 Vachengeti Trilogy - Vachengeti Trilogy
2.5 Makoronike eChisarudzo Chakateedzana - Makoronike eiyo Mumwe
3 Zvinyorwa zvemabhuku akakurumbira aNora Roberts
3.1 Matatu Ekuenda (2004)
3.2 Kune anogara ari mangwana (2011)
3.3 Kuberekwa (2003)
3.4 Akazvarwa neMoto (2007)
3.5 Muchato Album (2010)
Eleanor Marie Robertson akaberekerwa muSilver Spring, Maryland, USA, musi waGumiguru 10, 1950. Aive iye ega mukadzi pakati pehama shanu mumhuri yaiwanzo kuverenga. Zvakare, mwanasikana mudiki wevaRobertson akagamuchira dzidzo yeKaturike mune yakaoma unadhi koreji. Ichi chiitiko - mumashoko emunyori pachake - chaive chakakosha kuumba maitiro ake ekuraira.
Miss Robertson vakapinda dzinenge zvese zvesekondari zvidzidzo pachikoro ichi Montgomery Blair High Chikoro. Muchikoro cheveruzhinji ichocho akasangana naRonald Aufem-Brinke, waakaroora muna 1968 uye akaita vana vavo Dan naJason. Vaviri ava vakaparadzana pakati-ma70. Munguva iyoyo, mudiki Eleanor akaita raramo semunyori.
Muna 1979, dutu rakamufemera kuti anyore bhuku rake rekutanga, Irish Yakagadziriswa, rakabudiswa muna 1981 (rakabudiswa muchiSpanish se Moto weIrish, 2002). Gore rakatevera akatanga kunyora nekukurumidza (mabhuku matanhatu akaburitswa). Pakazosvika gore remuchato wake wechipiri - 1985, naBruce Wilder - anga atove akaunganidza anopfuura makumi matatu mabhuku enganonyorwa.
Muna 1996, bhuku rake Montana Denga zvaireva kupfuudza huwandu hwemanovhodhi zana akaburitswa. Asina kugutsikana nazvo, akawedzera basa rake nesimba kusvika pahuwandu hwemaawa masere (zvinosanganisirwa, panguva yezororo). Ukuru hwebasa rake nderekuti muna 2008 Vanyori veRomance veAmerica Lifetime Achievement Award vakapihwa zita rekuti Nora Roberts Lifetime Achievement Award, mukumukudza. Kwete pasina chinhu iye munyori ari pakati vanyori vanobhadharwa zvakanyanya pasirese.
Rondedzero yakazara yemabhuku akanyorwa naNora Roberts inoda chinyorwa chakaparadzana. Nenzira imwecheteyo, hazvigoneke kutsanangura mune rimwe peji izvo zvakajairika mukati meakakura akasiyana mavara ake. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa: mazita emunyori weAmerica akashandurwa pazviitiko zvakawanda kune hombe screen, pamwe neTV terevhizheni. Uye kana paine chimwe chinhu chinoratidza munyori uyu, ndizvozvo mabhuku ake ndeekufamba mune fungidziro.
Mamwe emasaga ake anozivikanwa kwazvo muSpanish anotsanangurwa pazasi. (iine zita rayo rekutanga muChirungu); vangangoita vese ndevechimiro chepamoyo chakajairika:
mudungwe Chitsuwa chehanzvadzi nhatu - Sista vatatu chitsuwa
Tambai Mumhepo - Tambai Pamhepo (2001).
Denga nenyika - Denga nenyika (2001).
Tarisana Nemoto - Tarisana Nemoto (2002).
Circle Trilogy - Circle Trilogy (fantasy zvinyorwa nezvevampires)
Muchinjikwa waMorrigan - Muchinjikwa waMorrigan (2006).
Kutamba kweVamwari - Kutamba kweVamwari (2006).
Mupata weKunyarara - Mupata weKunyarara (2006).
Chiratidzo cheManomwe Trilogy - Chiratidzo cheChinomwe
Ropa Hama - Ropa Hama (2007).
Sango Rakakomba - Homwe (2008).
Dombo revahedheni - Dombo revahedheni (2008).
Vachengeti Trilogy - Vachengeti Trilogy
Nyeredzi dzeRombo - Nyeredzi dzeHome (2015).
Gungwa - Gungwa rekugomera (2016).
Girazi chitsuwa - Chitsuwa cheGirazi (2016).
Makoronike eChisarudzo Chakateedzana - Makoronike eiyo Mumwe
Gore Rokutanga - Gore Rokutanga (2017).
Yeropa uye Bone - Yeropa uye Bone (2018).
Kukwira kwaMagikos - Kukwira kwaMagick (2019).
Zvinyorwa zvemabhuku akakurumbira aNora Roberts
Sezviri pachena, kuita sarudzo ye "mabhuku akanakisa" nemunyori akadaro, akangwarira uye anehunhu anogona kurerekera. Nezve iro basa rinoreva kushandiswa kwechimiro - zvisinei nekuti mafomu akangwarira zvakadii - kure nekuenzana. Mupfungwa iyi, anotevera mazita akasarudzwa anokoshesa kudzika kwemakakatanwa avo pamusoro penhamba dzekutengesa.
Nzvimbo nhatu (2004)
Unogona kutenga bhuku pano: Nzvimbo nhatu
Matatu matatu - MuchiRungu, 2002— inotaurira kuuya kwehama nhatu dzinofamba nyika dzichitsvaga mhuri yemhuri yakakosha kwazvo. Zvisinei, rwendo rwavo rwuri kure nekutsetseka kana kupfupika. Rwendo rwacho rwunotora ma protagonists kuyambuka makondinendi mune basa rinoita serisina basa. Kunyangwe, kune vaverengi kukokwa kusingadzivisike kurongedza mabhegi avo voenda parwendo.
Kune nguva dzose mangwana (2011)
Kune nguva dzose mangwana.
Unogona kutenga bhuku pano: Kune nguva dzose mangwana
Inotevera Nguva Dzose --Original English title- ndiyo vhoriyamu yekutanga yeyakagamuchirwa Inn Boonsboro Trilogy. Inotaurira zviitiko zvakatenderedza hama nhatu naamai vavo chaivo. Avo vanosarudza kugadzirisa uye kuvhura diki diki renhoroondo, inomiririra chiitiko chinoitwa nemunyori iye chaiye muhupenyu.
Unogona kutenga bhuku pano: Dangwe
Callie Dunbrook ndomumwe wevanhu vakadzika kwazvo vaNora Roberts. Iye asingatyi, akangwara, anoremekedza archaeologist uye mune zvachose chimiro cheanofarira, kunyangwe kana zvichireva kubuda mukurega basa. Iri bhuku rakarumbidzwa zvikuru nevatsoropodzi nevaverengi nekuda kwenyaya inonakidza kwazvo, izere nezviito.
Akazvarwa nemoto (2007)
Unogona kutenga bhuku pano: Akazvarwa nemoto
Akazvarwa mumoto (1995), ndiyo yekutanga chikamu cheiyi yakateedzana Iyo Concannon Sista. Icho chinyorwa chinoratidzira kunaka kwese kwejogirafi, vanhu uye tsika yeIreland. Ikoko, kudanana kwakanyanya kunoitika pakati paMargaret Mary, protagonist, uye muridzi weartari gallery. Saizvozvo, iri bhuku rinoonekwa sereferenzi yenyaya dzerudo dzekare.
Album yemuchato (2010)
Unogona kutenga bhuku pano: Album yemuchato
Chiono muWhite (2009) - zita rekutanga muChirungu- ndiyo vhoriyamu yekuvhura yeSaga inozivikanwa yeMichato mina. Inorondedzera hunyanzvi hwehanzvadzi nhatu mubhizimusi rekuronga michato uye kunetsekana nekutsvaga kwavo "vakararama vachifara nekusingaperi." Kunyangwe paine misiyano pakati pavo, simba remhuri zvisungo zvinogara zvichikunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Nora Roberts mabhuku
Zuva reRopa, naJo Nesbø. Ongorora